indawo yokuhlala - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguYannick
Kwindawo ethe cwaka kakhulu, uza kufumana umntu onobulumko nobubele, namathuba okungena xa ndingekho (isitshixo kwibhokisi ekhuselekileyo enekhowudi oza kuyifumana ngomyalezo kwinombolo yakho yobuqu). Yonke into oyifunayo (ilinen yebhedi, iitawuli, i-shower gel, ishampu...) iyafumaneka kwaye ukuba kuyimfuneko, ukufikelela ekhitshini kukuvumela ukuba ulungiselele isidlo sakho... Isidlo sakusasa siza kunikwa ukuqalisa usuku . Sijonge phambili ekukwamkeleni...
Ukuba ungathanda ukuva ingxolo yokulala, le asiyiyo indawo yam yokuza:)
Kwelinye icala, ukuba ufuna ukugcina ubumfihlo bakho kwaye ulale kakuhle, ndiza kukulinda...
I-Charpont yidolophana encinci engenazo iivenkile (kukho ibhari yecuba kuphela, uhamba nje imizuzu eyi-5 ukusuka endlwini). Ngemoto, uza kuba nemizuzu eyi-5 ukusuka kwindawo yokungena eDreux (apho uza kufumana zonke iintlobo zeevenkile zokutyela kunye neevenkile), imizuzu eyi-10 ukusuka eNogent le Roi;
indlu engasemva ekwimizuzu eyi-2 (isalathiso), ivenkile yokutyela, ukutya kwaseFransi, imizuzu eyi-10 kude: iChaudon (isalathiso seNogent Le Roi)
Ngoko ukuba ukhetha ukuza kwindawo yam, uyayazi yonke into ngendawo.
kuxhomekeka kwimihla, kusenokwenzeka andikho, kodwa kuza kusoloko kukho umntu oza kukuhoya ukuba kuyimfuneko.
ukuba ndikho, ndiza kuzama ukuhlala ndinengqiqo kangangoko kunokwenzeka kodwa ke, ndikulungele ukuthetha;)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charpont